Pillow "Vintage Vintage" - Moi Mili
Home > Ondana "Vintage rose"
Ondana "Vintage rose"
Ny oniversite Moimili tany am-boalohany "Vintage rose" dia tolo-kevitray amin'ny fananganana fandriana, sofa, seza seza. Ny modely tsara tarehy sy maro loko dia hampifaly ny ao anatiny. Ny ondana dia mety ho fanampin'ny zana-tsinay amin'ny andiany mitovy.
Ny ondana dia namboarina matevina ary voakapa avy amin'ny lamba landy avo lenta. Ny lamba mareva-doko dia hampifalifaly ny kotrik'ninao, fa ho toy ny tsara tarehy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny io. Mampirisika anao izahay hamorona famoronana cushion avy amin'ny volavola misy.
Habe 40 x 40 cm.
Fitaovana: landihazo, landy madio, eco, voajanahary, lamba voajanahary, lamba floral, ondana floral